Oman: Miverina tsikelikely ny fibilaoginina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2018 13:35 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Português, English
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Jiona 2007)
Niala tamin'ny Gonu, tadio tropikaly namely ny firenena tamin'ny fiandohan'ity volana ity ny sehatra fibilaoginina Omaney. Niezaka nivoatra sy niresaka lohahevitra samihafa ireo bilaogera tamin'ity herinandro ity.
Ti3gib mihevitra fa mihamalazo ireo bilaogera Omaney ary tsy mavitrika toy ireo bilaogera avy amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina:
Mihena hatrany ny isan'ireo bilaogera mavitrika ary miharihary izany tamin'ny herintaona, ary raha mbola mitohy tahaka izany, dia hangina tanteraka isika bilaogera Omaney ao anatin'ny volana vitsivitsy manomboka izao. Tsy fantatro ny antony, fa mieritreritra aho fa mety ho antony lehibe ny fitantanana ny fotoana. Sahirana loatra, fialan-tsiny fa tsy antony, angamba mora resena kosa ny hakamoana sy fahazarana.
Satria efa manakaiky ny fahavaratra, manontany an'ireo bilaogera momba ny tetikasan'izy ireo fahavaratra i Al Mawaali,
ary Omani Expat nandefa momba ireo hetsika fialantsasatra ao an-trano izay azo atao:
Manomboka ny volana Mey ka hatramin'ny Septambra, miakatra be ny hafanana sy ny hamandoana ao amin'ny Sultanà. Tsy mety intsony ireo hetsika ivelan'ny varavarana, toy ny fizahan-tany na ny fitsangatsanganana. Tsy maintsy manao hetsika ao an-trano ianao, toy ny:
1. Club intercontinental, izay ahafahanao mampiasa ny dobo filomanosana, kianjan'ny squash ary ny efitrano fanatanjahantena.
Ity iray ity dia ho an'ny mpanjifa Omaney, Suburban mitantara ny tantaran'ny tolotra mahatsiravina ho an'ny mpanjifa, ny fanorisorenana, ary ny fanaintainana amin'ny fifampiraharahana amin'ireo tovolahy mpanatitra entana ao amin'ny fivarotana elektronika goavana ao Oman:
Nividy milina fanasan-damba vaovao tena lafobe aho tamin'ny herinandro lasa teo tao amin'ny EMAX. Ahitana ny safidy rehetra izy, mahavita karazana fanasana iray hetsy eo ary avy amin'ny mpanamboatra azo itokisana. Tsy nanan-kevitra ilay mpivarotra, saingy nanampy ihany. Nisy fitaterana nomanina roa andro taorian'izay. Roa andro taty aoriana, araka ny efa nampanantenaina, nahazo antso avy amin'ireo mpanatitra entana very lalana miezaka mitady ny tranoko ao amin'ny faritra misy ady aho. Diso avokoa ny zava-drehetra nanomboka teo.
Nizara ny hira Gonu avy amin'ilay mpihira Omaney Salah Al Zadjali ireo bilaogera manerana an'i Oman, ity no nolazain'i Muscat & Wife momba izany:
I know we weren't in the best of spirits because of what happened (Gonu and whatnot), but if you are reading this, then Im sure you have survived it 🙂
Fantatro fa tsy falifaly endrika isika izao noho ny zava-nitranga (Gonu sy ny zavatra hafa), fa raha mamaky ity ianao, azoko antoka fa tafavoaka velona tamin'izany ianao 🙂
Te hizara zavatra manokana aminao aho. Ny hira vaovaon'i Salah's Al Zadjal izany. Izay nosoratany taorian'ny Gonu …